4FeO + O2 → 2 Fe2O3
bir (ii) xabagta Oxygen macdanta birta
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 4FeO + O2 → 2Fe2O3
Waa maxay xaaladda falcelinta FeO (iron(ii) oxide) ee O2 (ogsajiin)
FeO waxay la falgashaa O2
Dhacdada ka dib FeO (iron(ii) oxide) waxay la falgashaa O2 (oxygen)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 4FeO + O2 → 2Fe2O3
5 1 1 Haah waa
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 5O2 + P4 → P4O10
Waa maxay xaalada falcelinta ee O2 (oxygen) ay kaga falceliso P4 ()?
Heerkulka: 34 - 60 ° C Xaaladda Kale: dab hawada ku jira
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa P4O10 ()?
Dhacdada O2 ka dib (oxygen) waxay la falgashaa P4 ()
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 5O2 + P4 → P4O10
Su'aalaha la xidhiidha alaabta P4O10 ()
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee P4O10 ()? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh P4O10 () badeecad ahaan?
hydroiodic acid Oxygen biyaha iodine
(xoog leh) (xoog leh) (xoog leh) (Đen Tim)
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 4HI + O2 H 2H2O + 2I2
Waa maxay xaaladda falcelinta HI (hydroiodic acid) ee O2 (oxygen) kaga falcelisa?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa H2O (biyaha) iyo I2 (iodine)?
HI wuxuu la falgalayaa O2
Dhacdada ka dib HI (hydroiodic acid) waxay la falgashaa O2 (oxygen)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 4HI + O2 H 2H2O + 2I2
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee I2 (oxygen)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh I2 (iodine) badeecad ahaan?